AnTuTu Benchmark အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ၏သြဇာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ လုံး Androidsis ပါ
AnTuTu Benchmark ၏အဆိုအရမေလ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု
Android လောကတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာ AnTuTu ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ GeekBench နှင့်အခြားအရာများအတူတကွယင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းယုံကြည်စိတ်ချရသောစံနမူနာအဖြစ်အမြဲတမ်းထင်မြင်စေသည် မိုဘိုင်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘဲ။
ထုံးစံအတိုင်း, ပုံမှန်အားဖြင့် AnTuTu သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လစဉ်အစီရင်ခံစာတစ်ခုသို့မဟုတ်စျေးကွက်တွင်တစ်လပြီးတစ်လစွမ်းအားအရှိဆုံးသောဆိပ်ကမ်းစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဒီအတောအတွင်းမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ OnePlus6ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အထင်ကရစမတ်ဖုန်းသစ်ဖြစ်တဲ့ OnePlus XNUMX ကိုထပ်တိုးတာကိုငါတို့သတိပြုမိနိုင်တယ်။ ဤအချက်မှ လွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောအခြားထင်ရှားသောအချက်အချို့ရှိသည် ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလအဆင့်. ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ဤစာရင်းသည်မကြာသေးမီကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်မေလကဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် AnTuTu သည်ဤလ၏နောက်အဆင့်၌ဤအလှည့်အပြောင်းကိုပေးနိုင်သည်။ AnTuTu Benchmark အရဤနှစ်များသည်ယခုနှစ်မေလ၏သြဇာအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်းများဖြစ်သည်။
Smartisan Nut R1 ဖြစ်သည်
Xiaomi က Black ကငါးမန်း
Samsung ရဲ့ Galaxy S9 +
ငါတို့မြင်တဲ့အတိုင်း OnePlus သည် Smartisan၊ Xiaomi နှင့် Samsung တို့၏လက်ရှိ flagship ထက် OnePlus6ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်ဇယား၏ဆဋ္ဌမနေရာတွင် Nubia Red Magic၊ သတ္တမ၊ Nubia Red Magic၊ သတ္တ ၀ ါတွင် Huawei၊ Mate2သည်အဋ္ဌမနှင့်နဝမ၊ Honor V10 တို့တွင်များစွာကွဲပြားခြားနားသည်။ ဤအမျိုးအစား၏နောက်ဆုံးနေရာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » AnTuTu Benchmark ၏အဆိုအရမေလ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု
Lenovo A5 နှင့် Lenovo K5 မှတ်ချက် - ဒီအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
မည်သည့် Android ပေါ်တွင်မဆို Huawei P3 PRO တွင် 20D ကဲ့သို့မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ယူရမည်နည်း